बग्दादी मार्न विशेष भूमिका खेल्ने कुकुरलाई ट्रम्पको मेडल ! - Dainik Online Dainik Online
बग्दादी मार्न विशेष भूमिका खेल्ने कुकुरलाई ट्रम्पको मेडल !
न्युर्योक । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहिबार एउटा ट्विट मार्फत आईएसका प्रमुख नेता अबु बकर अल बग्दादी मार्न विशेष भूमिका निर्वाह गरेको कुकुरको फोटो सार्वजनिक गरे ।
बग्दादी विरुद्धको अपरेसनका क्रममा घाइते रहेको कुकुरलाई ट्रम्पले मेडल लगाउँदै गरेको देखिन्छ । तर उक्त फोटो नक्कली रहेको पाइएको छ । अमेरिकी पत्रिका डेली वाइरले इडिट गर्दै बनाएको फोटो ट्रम्पले आधिकारिक ट्विटर ह्याण्डलबाट सेयर गरेका हुन् ।
उक्त फोटोको वास्तविकता यस्तो रहेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले नक्कली फोटो सेयर गरेपछि उनको धेरैले आलोचना गरेका छन् ।
— Leticia Rendon? (@lrendon247) October 30, 2019
राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि गत मंगलबार पनि कुकुरको फोटो सार्वजनिक गरेका थिए ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्विट गर्दै भनेका थिए –हामी त्यो कुकुरको फोटो सार्वजनिक गर्दैछौं, जसले आईएसआर्ईएस अबु बकर अल–बग्दादीलाई मार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो।’
आईएसआईएस प्रमुख बग्दादीलाई मार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेपछि पछिल्लो समय मिडियामा उक्त सैनिक कुकुरको चर्चा चुलिएको छ।
यो कुकुर आर्मी डेल्टा फोर्समा कार्यरत छ, जो जटिल अपेरशनका लागि ख्याति प्राप्त हुन्छ । अमेरिकी सेनाको एक जना अधिकृतका अनुसार बग्दादी विरुद्ध चलाइएको अपरेशनमा यो कुकुर सामान्य घाइते भएको थियो । तर, यो स्वस्थ भइरहेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले यो कुकुरलाई ‘सुन्दर र प्रतिभावान’ भएको टिप्पणी गरे। तर, यसको विषयमा विस्तृत जानकारी भने दिइएको छैन ।
अमेरिकाले गत आइतबार कुकुरको सहयोगमा पश्चिमी सीरियाको बारिशा नजिकै एक अपरेशनमा बग्दादीलाई मारेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमका अनुसार यो कुकुर बेल्जियन मालिानोस नस्लको हो । यद्यपी अमेरिकी सेनाले यसको खुलासा गरेको छैन ।
यसअघि २०११ मा काहिरा नाम गरेको कुकुरले पाकिस्तानको एबटाबादमा अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन विरुद्ध चलाएको अपरेशनमा लादेनलाई समाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।